Xaaladda qaxootiga Sweden oo adkaatay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xaaladda qaxootiga Sweden oo adkaatay
La daabacay fredag 20 november 2015 kl 14.30
In kasta oo ay Iswiidhan dhowaan biloowday in ay xududaha waddanka ilaaliso, weli qaxooti faro badan ayaa ku xanibma waddanka Jarmalka, khaasatan qaxootiga aan doonayn in ay Iswiidhan ka dalbadaan magan-gelyo-doon.
Kuwan ayaa doonaya in ay sharci ka codsadan wadammada Norway iyo Finland. Hasayeeshe ilaa xuduudaha iswiidhan la bilaabay in la ilaalaaliyo islamarkaasna ay dawladda Iswiidhan sheegtay in qaxootiga dalka soo gala uu magan-gelyo halkan ka dalbado ama aannu soo gelin, hase yeeshee ey ku adkaatay qaxootiga dooneya inuu waddammo kale uga sii socdaalaan ey aad ugu adkaatay. Thomas Oppermann, siyaasi jarmal ah ayaa ka tirsan xisbi xisbi u dhigma Socialdemokraterna, isagoona sheegay inuu taageerayo go'aanka ay dawladda Sweden ku gaartay inay xuduudahooda ilaaliso.
-Waan fahansanahay sababta ay Iswiidhan sharcigan u soo dejisay. Jarmalka qudheeda wexey bilowday in ay kantaroosho xuduudka waddanka österrike. Hadii ay Iswiidhan nugu soo celiso qaxooti aan doonayn in ay Iswiidhan sharci ka codsatan oo ku socda Norway amba Finland, sharcigi ay sameesyteen ayey raacayaan uun, ayuu sheegay Oppermann.Dhowaan ayuu la kulmay wassirka socdaalka Morgan Johansson iyo Anders Ygemann oo ah wassirka arrimaha gudaha ee Iswiidhan. Halkan oo ay ka wada hadleen xaalada iminka Yurub ka jirta, khaasatan in ay falalkii argagaxiso soo kordheen. Halka ilaalista lugu kordin laha xuduudaha Yurub, wuxuu sheegay Oppermann in ay Iswiidhan iyo Jarmalku bilaabto dood ku saabsan in waddanka Turkiga la siiyo hawsha in ay iyagu xuduudka konfurta Yurub ilaaliyaan.
-Iswiidhan qaxooti faro badan ayey qaabishay, waxaaney gaadhey heerkii ugu dambeeyay, in intaas ka badan ma qaabili karaan, sido kale Jarmalka. Hasayeeshe tani kama dhigna in qaxootigan la lug gooynayo oo marba wadamada kale ee Yurub dib loogu celinayo.Kuwa Yurub soo gadhay waa in aan xall u helno, kana caawino si ay bulshada mid uga noqon lahayeen, islamarkaas na ilaalista lugu badiyo xuduudaha waddamada konfuurta Yurub, ayuu sheegay Oppermann.